Fihaonambe A Real Nielsen Ratings Family
Fianakaviana Nielsen - Iza moa Izy Ireo? Fanadinadinana amin'ny fianakaviana Nielsen Real
Impiry ianao no nieritreritra fa raha toa ianao ka noraisina ho fianakaviana Nielsen dia tsy ho tapitra ny fampisehoana ankafizinao indrindra? Fantatro fa nieritreritra aho fa imbetsaka nandritra ny taona maro raha nahita ny fampisehoana lehibe dia nofoanana amin'ny mason'ny maso.
Ny fivelomana amin'ny fahitalavitra tsirairay dia miankina amin'ny fanombatombana Nielsen. Eny, dinihina ny fandraisana an-tsarimihetsika DVR sy ny aterineto, saingy rehefa tonga eo izy dia ny ratings Nielsen no tena zava-dehibe raha mijanona amin'ny fahitalavitra ny fandaharana amin'ny fahitalavitra.
Koa, ahoana no hamaritan'i Nielsen ny isan'ireo vokatra? Manakarama fianakaviana avy amin'ny làlana rehetra manerana ny firenena izy ireo mba ho lasa 'Nielsen Family' ofisialy. Ny fianakaviana tsirairay dia manondro karazam-ponenana manokana ao an-tsenany (New York, Los Angeles, sns.), Izay manampy amin'ny famaritana ny 'anjaran'ireo' programa tsirairay.
Efa mba nanontany tena ve ianao hoe iza ireo fianakaviana Nielsen ireo? Tena miala eto izy ireo? Valiny mahatalanjona ny valiny ary tsara vintana izahay ka afaka nanadinadina ny iray tamin'izy ireo!
Alao sary an-tsaina ny hafaliako rehefa nahafantatra aho fa iray amin'ireo mpiara-miasa amiko eto amin'ny About.com dia fianakaviana Nielsen. Barb Crews, izay mitantana ny tranonkala fanta-daza, dia tsara fanahy amin'ny valinteny rehetra momba ny fizotran'ny Nielsen ...
F: Ahoana no nanatonanao mba ho lasa fianakaviana Nielsen?
Barb: "Heveriko fa nandondona teo am-baravarana izy (tsy tsaroako raha nahazo antso an-tariby teo aloha aho, saingy tsy mieritreritra izany aho).
Nametraka fanontaniana maromaro maromaro izy ireo. Ny zavatra mahagaga dia, nangatahana izahay handray anjara telo na efa-taona talohan'io ary efa napetraka ny hanaovana izany. Rehefa tonga teo am-pandehanana nialoha ny fametrahana azy ry zareo, dia hitan'izy ireo fa tsy afaka manao izany satria nisy DVR-recorder ary i Nielsen dia tsy natsangana tamin'izany. Rehefa nanontaniana izahay fanindroany (taona maromaro tatỳ aoriana) dia nilaza tamin'izy ireo aho fa i Nielsen dia manana fomba hanaraha-maso izany fitaovana izany. "
F: Inona no nahatonga ny fizotry ny fananganana sy ny fomba fiasan'ny fizotran'ny fitiliana?
Barb: "Oay loatra ny fitsangatsanganana.
Voalohany dia tsy maintsy milaza aminareo aho fa na dia "olona roa" ihany aza izahay - manana trano lehibe sy fahitalavitra maro izahay. Ny fahitalavitra tsirairay dia tsy maintsy notsaboina, na dia iray aza izay nampiasaina tamin'ny vidin'ny VCR sy DVD tamin'ny efitra fisakafoanana.
Manana olona enina na fito izahay nandritra ny andro manontolo. Manodidina ny 8 ora ka hatramin'ny 7 amin'ny alina ny fametrahana ny rafitra ary dia tsy nijanona mihitsy aza izy ireo nandritra ny sakafo antoandro! Ny lehilahy Nielsen dia avy amin'ny fanjakana manodidina anay. Ireo lehilahy natsangana dia ireo teknisiana izay manara-maso ny fitaovanao, fa ianao kosa dia fianakaviana Nielsen. Noho izany, ohatra, nisy lehilahy iray izay nanana ny fanjakany sy ny mpifanandrina taminy tany amin'ny fanjakana hafa tsy lavitra teo ary nanampy azy hanangana. Nolazaina taminay fa anisan'ireo fitaovana lehibe kokoa nataon'izy ireo izany.
Ny TV tsirairay dia manana rafitra solosaina mifandraika aminy sy filahatry ny lava (jereo ny sary). Ny boaty an-tariby, ny horonan-tsarimihetsika VCR na DVD dia voatery nampifandray sy nanara-maso. Ka nisy ny tambajotra nanerana an'izao tontolo izao. Nandany ora maromaro tao amin'ny efitrano fahitalavitra izany rehetra izany mba hahazoana izany rehetra izany.
Taorian'ny fananganana, ny TV tsirairay dia manana boaty fanaraha-maso kely miaraka amin'ny fifehezana remote (jereo ny sary). Ny isam-pianakaviana dia nanana isa iray, ary misy isa fanampiny ho an'ny vahiny. Isaky ny mijery fahitalavitra izahay dia hampiasa ny fifehezana an-tariby mba hanasonia amin'ny hoe iza no mijery tele. Ny jiro boaty fanaraha-maso dia hanohy izany olona izany na olona manokana.
Raha tsy nampiasa ny remote ianao hiditra an-tsoratra rehefa navadika ny fahitalavitra dia manomboka miboridana sy mamirapiratra mandra-pahatongan'ny olona voasoratra anarana. Ny fomba nanoloran'i Nielsen azy, dia tokony "hamelombelona" ihany koa isika izay nijery azy isaky ny 45 minitra. Noho izany, 45 minitra amin'ny fampisehoana dia manomboka mamiratra ny jiro mandra-piverinay indray ilay bokotra.
Ny fantsona fantsona, sns ... dia tsy nisy fiantraikany teo aminy. Nosoratany avokoa izany rehetra izany. Amin'ny ankapobeny dia tsy maintsy nanao izay hahazoana antoka isika fa "nosoniavina" tamin'ny bokintsika ao amin'ny boaty fanaraha-maso. Manana boaty fanaraha-maso eo amin'ny fahitalavitra tsirairay izahay.
Avy amin'ny zavatra azoko - raha niala tamin'ny fahitalavitra aho ary namela izany nandritra ny ora vitsivitsy (toy ny amin'ny efitrano hafa), raha mitsoka ny jiro, ny solosaina dia midika fa tsy nisy nijery na tsy nanisa izany ny fampisehoana manokana.
Efa zatra manao izany haingana dia haingana ary tsy olana mihitsy izany. "
F: Firy ny tokantrano nampiseho anao?
Barb: "Tsy azonao antoka ny dikan'ny hoe, vadiko sy izaho.
Saingy izy ireo dia nanana ny zafikeliko talohan'ny sekolim-pianarana ho mpitsidika tsindraindray. Nikaroka ny momba ny demografika sy ny zavatra azoko izy ireo, dia tsy nampiasa anay raha toa ka misy olona latsaky ny 18 taona aty. "
F: Raha vao nihazakazaka ianao dia nanohy ny fandaharam-potoana fijerena televiziona mahazatra anao ve ianao sa nanova ny fahazaranao mijery?
Barb: "Tany am-piandohana dia azo antoka kokoa ny momba izany, saingy tsy namerenana na nanova ny fomba fijerintsika."
F: Moa ve hitanao fa nanjary nahatsapa bebe kokoa ny safidy nataonao ianao?
Barb: "Tsy tena izy."
F: Nisy fampisehoana nataonao ve nijery na nanisy bokotra manokana tsy maintsy nanosika anao?
Barb: "Ny zava-drehetra dia voamarina (jereo eto ambony) raha tsy hoe tsy nanosika ny bokintsika izahay ary avy eo nihevitra i Nielsen fa tsy nisy nijery na nivoaka avy tao amin'ilay efitrano. Mampihomehy izany, saingy nanam-potoana be izy ireo ary nanana fitaovana maro nampiasaina tao aminay. tranonay, dia nahatsapa izahay fa tsy maintsy ho azonay antoka ny hampitsahatra ny fiafarantsika sy ny fametrahana ny fanaraha-maso hatrany amin'ny fotoana rehetra. Mety ho nodinihinay ny jiro maivana, saingy io no hany làlan-tokana tsy noraisina . "
F: Raha misy fampisehoana maherin'ny iray monja amin'ny fotoana tianao hijerena, ahoana no nataonao?
Barb: "Nampiasa ny takelaka DVR izahay, izay nanara-maso an'i Nielsen ihany koa, ka afaka nilaza izy ireo rehefa nijery ireny fampisehoana ireny izahay na dia nijery DVD aza izahay."
F: Narahanao ve ny ratings Nielsen?
Barb: "Raha tianao ny hijery azy ireo rehefa nambara izy ireo, indraindray, fa tsy matetika. Indraindray aho dia mivoaka ny trano rehefa mahita mpijery amin'ny ankamaroan'ireo fampisehoana an-tsehatra indrindra aho, saingy tsy izany no nitranga!"
F: Efa nijery fampisehoana ve ianao satria teo an-dalam-pandefasana?
Barb: "Mazava tsara."
F: Moa ve ianao mijery mozika iray miorina amin'ny tolo-kevitry ny namana?
Barb: "Eny, eny, heveriko fa ny talk-show momba ny rano no nanampy antsika hitarika ny sasany amin'ireo zava-misy ary toa tsy nahita azy ireo ny vanim-potoana vitsivitsy voalohany."
F: Nanjary fianakaviana Nielsen ve ianao?
Barb: "Eny, fa kely indrindra: Nahazo 50 dolara isaky ny enim-bolana izahay ho an'ny 200 dolara. Nolazaina izahay fa hahazo $ 100 misaotra amin'ny faran'ny 24 volana, saingy tsy mbola nandray izany. tsy maintsy manome azy ireo antso. "
F: Firy taona ianao no fianakaviana Nielsen?
Barb: "roa taona."
F: Ahoana no fahatsapana fa manana io karazana fahefana io?
Barb: Izay mahafantatra ahy, dia fantatro fa tiako ny manome ny hevitro ka tsy misy ny fanontaniana hoe hanao izany aho rehefa anontaniana. Tsy azoko antoka hoe tena nanampy ahy manokana ny fitiavako, saingy nahatsapa aho fa nanana vato. Avy amin'ny zavatra fantatro fa tsy ireo fianakaviana maro manerana ny firenena izay manao fanaraha-maso / fanaraha-maso nataonay, ka nahafinaritra ny nifidiananay.
Tena nahavariana ahy ny fiheverana ny maha-zava-dehibe azy rehetra, nantsoina imbetsaka izahay nandritra ny 24 volana mba hahazoana antoka fa mitovy daholo ny tahiry manokana rehetra. ohatra fanadihadiana manokana momba ny fiara, tompon'andraikitra, ordinatera, zavatra toy izany. Raha nampidirintsika fitaovana vaovao (ohatra TV vaovao) izy ireo dia hametraka azy io ho anay ary nanome anay fepetra kely mba hahafahan'izy ireo manara-maso azy io. "
Barb adds ihany koa ...
"Nampifandraisina tamin'ny telefaona ny fitaovana ary nakariny isaky ny alina nandritra ny alina, ka raha tsy marina ny zavatra iray na tsy nirakitra an-tsoratra dia ho fantany izany avy hatrany ary hahazo antso an-telefaona aho. dia hivoaka sy hamantatra ny zava-dratsy, sns. Raha nilaza aho fa nandray tamim-pahamendrehana izy ireo ary nahatsapa ihany koa fa tsy manelingelina antsika mihoatra noho ny ilaina izany. Manana solontena mahafinaritra izahay izay niaraka taminay nandritra ny 24 volana manontolo. "
Inona no niafina tamin'ny "adihevitra na tsy fetezana?"
Free Game Show Templates amin'ny PowerPoint
'90210' Andiany fizarana fizarana voalohany
Inona no nitranga tamin'ny 'Modelin'i Topy Amerikana manaraka'?
Ny lahateny amin'ny alina be harena no maneho ny tompony
Fitsipiky ny FAQ: Mivezivezy ny bala taorian'ny adiresy ny rivotra - famaizana ve?
Ady Korea: USS Leyte (CV-32)
Ny Fiainana, ny Fampianarana ary ny Zakin'ny Hakine Zazakely
Jereo kely: Tantara Jazz
Miara-misakafo: Orchestra Emotion
2002 US Open: No. 2 ho an'i Tiger Woods
Ahoana ny fomba hametrahana takelaka modely amin'ny tavy
A Glossary ny fitafiana silamo
Alefaso hockey: Torolalana ho an'ny mpangataka
Ahoana ny fomba ampiasain'ny "mpampianatra" (hampianatra) amin'ny teny Frantsay?
Is it Latitude or Longitude? Fantaro ny fomba hahatsiarovanao ny fahasamihafana
Ny anaran'ny anarana ELLIS sy ny tantaram-pianakaviana
Ny Vehivavy Picasso: Vady, am-pitiavana ary mozika
Fahatakarana ny loko faharoa amin'ny zavakanto sy ny vokany
Ahoana no hanovana ny anaran-tsanganana amin'ny MySQL
MLA Bibliographie na asa voatondro
Toro-kevitr'ireo mpividy ho an'ny ankizy Skateboards
5 Fampidiran-tsakafo lehibe ho an'ny mpanjifa sy ny mofomamy
Inona no nandainga?
Lalao grenady gorodona ho an'ny kilasinao